laacibfm.com » Mid Ka Mid ah Garoomada Ugu Caasan Qaarada Yurub Oo La Duminayo
Mid Ka Mid ah Garoomada Ugu Caasan Qaarada Yurub Oo La Duminayo
Garoonka caanka ah ee San Siro ee ku yaala magaalada Milan ayaa la duminayaa iyadoo lagu bedelayo garoon cusub ka dib markii maamulka ilaalinta dhismayaasha dhaxalgalka ah ee Talyaaniga ay sheegeen inaysan ka soo horjeesan doonin qorshaha lagu duminayo garoonka.
Kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ayaa wadaagayay garoonkaan oo la dhisan sannadkii 1926kii.
Sannadkii la soo dhaafay labada kooxood ayaa codsi wadajir ah gudbiyay iyagoo dalbanaya in la dhiso garoon cusub oo 60 kun taageerayaal qaada kaasoo laga dhisayo goobta uu haatan ka dhisan yahay San Siro.
Inkastoo maamulka ilaalinta dhismayaasha qadiimiga ah ay ogolaadeen hadana weli howlo badan ayaa harsan iyadoo talaabo weyn loo qaaday dhisida garoon cusub.
Garoonka San Siro waxaa iska leh dowlada hoose ee magaalada Milan, waxaana loo arkay inuusan laheyn muhiimad loo ilaaliyo oo looga soo horjeesto dumintiisa.
Garoonka San Siro waxa uu maray dayactir badan, iyadoo ay hareen kaliya qeybo yar oo ka mid ah dhismihii ugu horeeyay ee la dhisan 1926kii.
Madaxda magaalada oo uu ku jiro duqa magaalada Milan Giuseppe Sala ayaa si joogta ah su’aal uga keenayay in gabi ahaanba la dumiyo San Siro, iyadoo kooxaha ay wax ka bedeleen qorshahoodii hore ee ahaa in gabi ahaanba dhulka la dhigo dhismaha garoonka.
Waxay haatan qorsheynayaan in la dumiyo qeybo badan oo ka mid ah garoonka islamarkaana la reebo dhismayaasha ku gaaf wareegsan garoonka kuwaasoo laga dhisayo xarumo cusub oo isboorti oo dadweynaha u furan.
Garoonka San Siro waxa uu xusuus ku leeyahay taageerayaasha kubada cagta Soomaalida ee jeclaan jiray kubada cagta Talyaaniga.
Inta badan kiilkii hore ee taageerayaasha Soomaalida ayaa si weyn ugu xirnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A iyadoo garoonka San Siro uu ahaa mid mar walba dhagahooda ku soo dhici jiray.